ဘိလပ်မြေ Mason ပြီးတော့ကွန်ကရစ် Finish ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့် Duty Template ကို – JobDescriptionSample
Home / ဘိလပ်မြေ Mason ပြီးတော့ကွန်ကရစ် Finish ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / အခန်းကဏ္ဍနှင့် Duty Template ကို
ရောထွေးကြောင်းဘိလပ်မြေပြောင်မြောက်နှင့် finish ကိုပစ္စည်းများ, ဥပမာအားဖြင့်အခင်းလမ်းဘေးစင်္ကြံဘို့, လမ်းခရီး, လက်ပါဝါတူရိယာတစ်ခုရွေးချယ်ရေးအလုပ်သမားသို့မဟုတ်မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ထူထောင်ရေး. လမ်းဘေးစင်္ကြံသို့မဟုတ်ရေကျင်းနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးပေါင်းစီစဉ်; patch ကိုပျက်ပြယ်; နှင့်တိုးချဲ့အဆစ်လှီးဖို့လွှ employ.
ယင်းအလိုပစ်ချနှင့်အဆင့်အထိဦးတည်ဘိလပ်မြေသယ်သောပုံစံများကို Fixed, ဤစီစဉ်.
ဖြန့်ဝေ, မြော, နှင့်မြင်သာထင်ချောမွေ့ပြောင်လက်, နှင့်ဇာတ်စင်, အလုပ်သမားဂေါ်ပြား, ထွန်ခြစ်, စွန်ပလွံသို့မဟုတ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ trowel, screed ပေးသို့မဟုတ်ပါဝါ.
မှိုတိုးချဲ့အဆစ်နှင့်အကြံပြုချက်များ, ချုံ့ခြင်းတူရိယာအသုံးချဖို့, jointers, နှင့် straightedge.
အမျိုးပေါင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်ကွန်ကရစ်မှမော်တော်ယာဉ်အပြောင်းအရွေ့ဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျးထားရန် truckdriver Sign, နှင့်စစ်မှန်သောအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကူညီရန်.
ပွန်းစားခြင်းဘိလပ်မြေမျက်နှာပြင် Make, ဖြီးလျှောက်ထား.
သေးငယ်တဲ့ကြောင်းကွန်ကရစ်မှ function ကို Vibe ကြောင်း, Power.
Cut အပြည့်အဝထုတ်ဖျက်ဆီးပစ်ဒေသများ, ချောင်းတွေအားဖြည့်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတွင်း, နှင့်တည်နေရာမြင်သာထင်သာပြင်ပေးဖို့ချောင်းတွေခိုင်ခံ့စေ, ပါဝါ tool ကိုနှင့်လာကြတယ်သုံးပြီး.
binding များအတွက်စုစည်းဖို့ damp ကြမ်းပြင်, grout သို့မဟုတ် slurry နှင့်အတူလပ်ချိန်နှင့်အိတ်ကပ်ပြည့်စုံ, စင်ကြယ်, trowel သုံးပြီး.
ဧရိယာအက်, ထည့်သွင်းဖြီးအသုံးချဖို့, ကကြမ်းတမ်းသို့မဟုတ် bumpy အခါနှင့်ထွက်ရှာတွေ့မှကြမ်းပြင်အတွေ့အကြုံနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ.
ရေစိုခံသို့မဟုတ်အပြင်ပန်း restore, နှင့်စစ်မှန်သော၏မျက်နှာပြင်ကုစားဖို့ဒြပ်ပေါင်းများ hardening နှင့်လုံခြုံရေးအကောင်အထည်ဖော်ရန်.
မြင်သာထင်သာဖြည့်စွက်နိုင်ရန်အတွက်ခက်ခဲခန့်မှန်းချက်, ခြစ်ပစ်, နှင့်ကြီးမားသောဒေသများတွင်အလုပ်လုပ်, ဘက်, နှင့်ပရိုဆက်ဆာ, လက် tools တွေကိုအလုပ်သမား, အစွမ်းသတ္တိအစက်များ, သို့မဟုတ်လေထုစို့.
ကျွန်းသစ်ဖြစ်ကြောင်းအနာစည်းဝေး, ရပျရပျလှည့်ပတ်လုံခြုံမှိုပြုပြင်ကြဖြစ်လာဖို့, လက် tools တွေသုံးပြီး.
ကဏ္ဍများကိုလီဆယ်, အကြံပေးချက်များ, နှင့်ကွန်ကရစ်အထောက်အကူ.
တောင်ပေါ်ကတော်တော် finish ကိုသို့မဟုတ်ကျောက်ဆူး screw နှစ်ခုထောက်ပံ့ဖို့ပြင်နံရံချေမှုန်းပစ်ဖို့, လတ်ဆတ်တဲ့ရောထွေးကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်ပုံစံအခြားလ်တာနှင့်အတူသတ္တုအဝတ်အစား.
grout ထုတ်လုပ်ရန်အရောအနှော, သို့မဟုတ် slurry, trowel သုံးပြီး, Tinker, ခြစ်ပစ်, သို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်-ပေါင်းစပ်ပြီးကိရိယာများ.
အခြေခံ၏ဧရိယာအပေါ်ခေါင်မိုးစက္ကူပြန့်နှံ့, နှင့် terrazzo အခြေစိုက်စခန်းဖွဲ့စည်းရန် trowel နှင့်အတူအမိုးမိုးအစီရင်ခံစာပေါ်သို့အမှန်တကယ်ဖြန့်ဝေ.
ဖျန်းရတနာချစ်ပ်သို့မဟုတ် hued ကြော, အမှုန့်သံမဏိ, သို့မဟုတ်အပြင်ပန်းအပေါ်အရောင်အမှုန့်သတ်မှတ်ထားသောကြောင်းပြည့်စုံကိုဖန်တီးရန်.
ဦးဆောင်နှစ်ဖက်အမျိုးမျိုးနှစ်သက်သော layout ကိုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာသတ္တုအဖွဲ့တိပ်ကိုလျှော့ချနိုင်အောင်, terrazzo စတင်သို့နှင့်မီဒီယာကသူတို့ကို.
ရေနှင့် muriatic အက်ဆစ်လြျှောအသုံးချရန်, နှင့်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးမှ.
မျက်နှာပြင်အတွက်ချစ်ပ်ကိုထည့်သွင်းဖို့မျက်နှာပြင်ကျော် curler အတင်း.
gloss မျက်နှာပြင်, device ကို surfacing သို့မဟုတ်ပြတ်သားလျှောက်ထား.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားအ-လူတွေပြည့်စုံအာရုံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ပြောနေနေကြတယ်ဆိုတာကို,, သငျသညျထုတ်လုပ်လျက်ရှိအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတှကျအခြိနျလာပြီ, စံပြအဖြစ်မေးမြန်းကိစ္စများ, မှားဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာ mesmerizing မဟုတ်.
ပစ္စုပ္ပန်နှင့်လာမည့် problemsolving နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်စပ်လျဉ်းလတ်ဆတ်တဲ့အသေးစိတျ၏အကျိုးကျေးဇူးများ active-သင်ယူ-နားလည်ခြင်း.
လတ်ဆတ်ဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းများနားလည်သဘောပေါက်သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်အခါတိကျတဲ့အခွအေနေအဘို့သင့်လျော်သောမဟာဗျူဟာ-အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်း trainingANDinstructional နည်းစနစ်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသင်ယူခြင်း.
အပိုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်များကိုစစ်ဆေးခြင်း-CheckingPERDetermining ထိရောက်မှု, မိမိကိုယ်ကို, သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများကကုစားအရေးယူသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ရန်.
လူမှုရေးအမြင်-သိ othersA တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အသိပညာသူတို့ reply ဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလုပ်ပေးနေချိန်မှာ.
အခြားသူတွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Dexter-ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ရပ်များ’ လှုပ်ရှားမှုများ.
အလေ့အထများသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အတွေးများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် Marketing ကို-စစ်မှန်သောအခြားသူတွေ.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-Active တစ်ဦးချင်းစီကိုထောကျပံ့ဖို့ချဉ်းကပ်မှုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေ.
ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း-ကိုစူးစမ်းရှုပ်ထွေးအခက်အခဲများနှင့်ဆက်စပ်မှုအင်ဖို critiquing လေ့လာပြီးနှင့်ရွေးချယ်မှုဆောနဲ့ options လျှောက်ထားရန်.
လုပျထုံးလုပျနညျးသုတေသန-ဆန်းစစ်ကို item လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်တစ်ဦးစတိုင်ထုတ်လုပ်ရန်လိုလား.
နည်းပညာဒီဇိုင်း-နည်းပညာလိုလားစားသုံးသူနှင့်အထွေထွေသို့မဟုတ်ရှိခြင်း devices တွေကိုအစေခံရန်.
ပစ္စည်းကိရိယာရွေးချယ်ရေး-ကိုစူးစမ်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများ၏ကြင်နာတဲ့အလုပ် execute ရန်လိုအပ်ခဲ့.
အရစ်ကျ-ထည့်သွင်းခြင်းအစီအစဉ်များ, စက်, ဝါယာကြိုးများ, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ.
မြောက်မြားစွာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက် programming-ရေးသားကွန်ပျူတာ packages များ.
စစ်ဆင်ရေးခြေရာကောက်-ကိုကြည့်ရှုခြင်းကွဲပြားခြားနားသောအချက်ပြ, ဘူးသီး, သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုကိရိယာမှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်နေသည်သေချာဖြစ်.
devices များသို့မဟုတ် devices များရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုစစ်ဆင်ရေးနှင့်မန်နေးဂျင်းကိုငျတှယျ.
ကို Maintenance-ဖျော်ဖြေထုတ်ကုန်အပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အခါထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၏အဘယ်အရာကို type ကိုလိုအပ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း.
ကုန်စည်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-ကွပ်မျက်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စစ်ဆေးမှုများ, ပံ့ပိုးပေး, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်သို့မဟုတ်နည်းစနစ်.
ကြည့်ရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း-စဉ်းစားနိုင်သမျှဖြစ်ကြောင်းအစီအမံ၏အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်နှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးသည်သင့်လျော်သည်သောတဦးတည်းကိုရှာဖွေ.
analysis-ကိုစူးစမ်းတဲ့စနစ်လုပ်ဆောင်ရမယ်ဘယ်လို functions တွေအတွက်လမ်းတိုးတက်မှု, အခြေအနေများ, နှင့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်သို့သက်ရောက်မှု impact ပါလိမ့်မယ်.
ငွေသားခြော task ကိုပြည့်စုံရကုန်လိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုချွေတာသုံးစွဲ-ကိုစူးစမ်း၏စီမံခန့်ခွဲမှု, ဤကုန်ကျစရိတ်များအတွက်စာရင်းကိုင်.
ပစ္စည်းသာယာအဆင်ပြေမှုများများ၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုများအတွက်အရင်းအမြစ်များ-လက်ခံခြင်းနှင့်မြင်နေ၏စစ်ဆင်ရေး, tools တွေ, နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်ထုတ်ကုန်လည်ပတ်.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-Developing လှုံ့ဆော်၏ကြီးကြပ်မှု, သူတို့လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီကိုဦးဆောင်, ကြောင်းအလုပ်အကိုင်များအတွက်အထိရောက်ဆုံးလူတွေကွဲပြားခြားနားသွား.
အကြီးတန်းကျောင်းဘွဲ့ (GED သို့မဟုတ်အကြီးတန်းကျောင်းနှင့်ညီမျှအရည်အချင်းသို့မဟုတ်)
ထက်ပိုပြီး2နှစ်ပေါင်း, သလောက်နှင့်အပါအဝင်4နှစ်ပေါင်း
ဇွဲ – 89.32%
ကြိုးစားအားထုတ်မှု – 93.53%
စီမံခန့်ခွဲမှု – 94.98%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 94.10%
အခြားသူများအဘို့စိုးရိမ်ပူပန် – 88.12%
ယဉ်ကျေးမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 90.44%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 89.08%
ဖိအား Threshold – 87.53%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 91.36%
အသေးစိတ်အာရုံစိုက် – 93.35%
ကျင့်ဝတ် – 90.56%
လွတ်လပ်ရေး – 84.01%
တိုးတက်ရေး – 83.08%
analytical အတွေးအခေါ် – 82.34%